Promotions and News - Red dot Zay
Home> Promotions and News Promotions and News
ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကအဘိုးအဘွားများနှင့်အနေများခဲ့လေ၏။ ညညများဆိုလျှင် အိမ်ရှေ့၌ဖျာကြမ်းလေးခင်းကာ အဘိုးအဘွားများနှင့်အိမ်နီးချင်းလူကြီးများသည် ရေနွေးကြမ်းအိုးနှင့်လက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်ကိုဝိုင်းလယ်တွင်ချ၍ ရောက်တတ်ရာရာစကားများကိုပြောတတ်ကြလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများသည် ရွှေစွန်ညိုဘာကိုလိုလို့ဝဲပါတယ်၊ ဆီမီးခွက်ကပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်၊ ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး၊ ညောင်ပင်တစ္ဆေဝေလေလေ ...စသည်ဖြင့် မြန်မာကစားနည်းမျိုးစုံကို ချွေးသံအရွှဲရွှဲ၊ ဖုန်အလူးလူးဖြင့် အော်ဟစ်မြူးတူးကာကစားခဲ့ကြလေ၏။ ပြေးရင်းလွှားရင်း လူကြီးများစကားဝိုင်းအနီးသို့ ရောက်သွားသောအခါများတွင် ဖုန်များပေနေသည့်လက်ကိုဘောင်းဘီဖြင့်သုပ်ကာ လူကြီးများ၏ရှေ့သို့လက်ဝါးဖြန့်၍ပြကြလျှင် လူကြီးများက လက်ဖက်သုပ်တစ်ဇွန်းကိုယူ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝါးထဲသို့ထည့်ပေးလေ့ရှိလေ၏။ ပြီးနောက် လူကြီးများက “သွားကြ.. သွားကြ ..” ဟူသည့်သဘောဖြင့် လက်ကိုကာ၍ပြကြလေ၏။ သဘောမှာ လူကြီးတွေစကားပြောသောနေရာအနီး၌လာမရှုပ်ကြနှင့်၊ ဝေးဝေးမှာသွားပြီးဆော့ကြဟူသည့်သဘောဖြစ်လေတော့၏။
ကစား၍မောပန်းလာသောအခါများတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးများ၏ပေါင်ပေါ်တွင်ခေါင်းတင်ကာ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကိုငေးမောနေမိတတ်ကြလေ၏။ ကြယ်ပွင့်ကလေးများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေသည့်ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကို တစ်ဝကြီးငေးမောခဲ့ကြရသည်မှာ ယခုပြန်တွေးသောအခါ၌ လွမ်းဖွယ်အတိဖြစ်ရလေတော့၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးများပြောလေ့ရှိသောကြောင့် မြောက်အရပ်တွင် ထူးထူးခြားခြားမြင်ရတတ်သောကြယ်ပွင့်ကြီးသည်ဓူဝံကြယ်ဖြစ်သည့်အကြောင်း၊ ညအခါခရီးသွားလျှင် ဓူဝံကြယ်အား မြောက်ဘက်အရပ်အဖြစ်အမှတ်သင်္ကေတပြုကာသွားကြရကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားမိကြရလေ၏။
ထို့အပြင် ခုနစ်စဉ်ကြယ်ဟူသည်ကိုလည်း မျက်စိထဲတွင်စွဲနေကြလေ၏။ အဆိုပါကြယ်ခုနစ်လုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောခုနစ်စဉ်ကြယ်၏အမြီးပိုင်းသည် ညဉ့်နက်သောအခါ အပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်းတက်လာလေ၏။ ခုနစ်စဉ်ကြယ်အမြီးထောင်ပြီဆိုလျှင် ညဉ့်နက်ပိုင်းသို့ ရောက်လာပြီဆိုသော အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်လေတော့၏။ ထို့အပြင် ကြယ်ပွင့်များကြွေကျသွားသည်ကိုမြင်လျှင် တံတွေးထွေးသကဲ့သို့ “ဖတ်.. ဖတ်” ဟု ပြုလုပ်ရသည်မှာလည်း အမောပင်ဖြစ်လေတော့၏။ ထိုသို့ကြယ်ကြွေသည်ကိုမြင်လျှင် ကံမကောင်းတတ်သည့်အကြောင်း၊ သို့ရာတွင် “ဖတ်.. ဖတ်” ဟုလုပ်လိုက်လျှင်ကံကောင်းပြီး လာဘ်ရွှင်သည့်အကြောင်းများကိုလည်း လူကြီးများကပြောပြကြလေ၏။ ထို့အပြင် ကြယ်ပွင့်များ၏အကြားတွင် တရွေ့ရွေ့လေးသွားနေသောဂြိုဟ်တုများကို လိုက်၍ကြည့်ရသည်မှာလည်း မမောနိုင်မပမ်းနိုင်ဖြစ်ပါလေတော့၏။ အခါပေါင်းများစွာတွင်လည်းလူကြီးသူမတို့ပြောသော ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ဖွယ်တို့ကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်မှတ်သားခဲ့ကြရလေ၏။
ကျွန်ုပ်တစ်ခုသတိရနေမိသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏အဘွားနှစ်ဝမ်းကွဲတော်စပ်သောဒေါ်မြသီ၏အကြောင်းဖြစ်လေတော့၏။ အဘွားဒေါ်မြသီအပျိုပေါက်အရွယ်တွင် ဒေါ်မြသီကိုအိမ်ထောင်ချပေးမည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်မြသီ၏အဖေနှင့်အမေသည် လင်မယားကွဲခဲ့ကြသည်ဟုသိရလေ၏။ ဒေါ်မြသီ၏မိခင်ကြီးက သူ၏သမီးအား ကုန်သည်ကိုဖိုးတင်နှင့်ပေးစားလို၏။ ဒေါ်မြသီ၏ဖခင်ကြီးကမူ လခစားစာရေး ကိုသာစိန်နှင့်ပေးစားလို၏။ မည်သို့မျှညှိနှိုင်း၍မရကြဘဲ နောက်ဆုံးတွင် အဘွားဒေါ်မြသီသည်မိခင်ဖြစ်သူ၏ဆန္ဒအတိုင်း ကိုဖိုးတင်နှင့်အကြောင်းပါခဲ့လေ၏။ တစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာပင် အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ကုန်ကူးသွားသောကိုဖိုးတင်သည် ဓားပြများ၏လက်ချက်ဖြင့် ဆုံးပါးခဲ့ရရှာလေတော့၏။ အဘွားဒေါ်မြသီမှာလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်မုဆိုးမကလေးဖြစ်ခဲ့ရရှာလေတော့၏။ ထိုအခါတွင်မှ အဘွားဒေါ်မြသီ၏ဖခင်ကြီးက “ငါမပြောဘူးလား...၊ ငါတို့သမီးဟာ မောင်ဖိုးတင်လိုခရီးလှည့်လည်သွားလာနေရတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ကံမစပ်ဘူး...၊ အခြေတကျနေရတဲ့ မောင်သာစိန်လိုလူမျိုးနဲ့ပဲကံစပ်မယ်ဆိုတာ ငါကသိပြီးသား...၊ ငါငယ်ငယ်တုန်းက ရွာဦးကျောင်းမှာနေခဲ့ရတုန်းက တို့ဆရာဦးသောဘိတကတွက်နည်းလေးတစ်ခုသင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်...၊ ငါ့စကားကိုနားမထောင်တော့ ငါ့သမီးလေးခမျာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မုဆိုးမဖြစ်ရရှာတာပေါ့...” ဟု တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြင့်တဖွဖွပြောလေ၏။ အဘွားဒေါ်မြသီ၏မိခင်ကြီးကလည်း ထိုအခါတွင်မှ “ကျုပ်မှားပါပြီတော်...” ဟု ၀န်ခံသဖြင့် ၄င်းတို့ လင်မယားသည် ပြန်လည်အကြောင်းဆက်၍ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြသောဟူ၏။ များမကြာမီမှာပင် အဘွားဒေါ်မြသီကိုလည်း စာရေးကိုသာစိန်နှင့်လက်ဆက်ပေးစားခဲ့ကြပြန်လေတော့၏။ အဘွားဒေါ်မြသီသည် ကိုသာစိန်နှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့်နောက် စီးပွားဥစ္စာဒီရေအလားတိုးပွားခဲ့သည်ဟု သိရလေ၏။ ကျွန်ုပ်အနေနှင့် ထိုအကြောင်းအရာကို လူကြီးသူမများအကြောင်းဆုံ၍စကားစပ်မိသောအခါများတွင် ပြောပြလေ့ရှိသည်ကို မှတ်မိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ၏။ နောင်သော် ကျွန်ုပ်သည် အဘမင်းသိင်္ခထံသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးသည့်နောက် အဘထံမှ ဗေဒင်ပညာရပ်များကိုသင်ယူခွင့်ရခဲ့လေ၏။ အဘထံမှ ဗေဒင်ကိန်းခန်းတွက်နည်း၊ တွက်ရိုးများအပြင် ဗေဒင်ပညာအပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်တွေးတောယူဆချက်များကိုလည်း ရရှိခဲ့လေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်က ကြားဖူးခဲ့သော အဘွားဒေါ်မြသီ၏အိမ်ထောင်ရေးကံကို မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာဖြင့်နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်၍ကြည့်ခဲ့လေတော့၏။ ဤတွင် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် အိမ်ထောင်ရေးကံ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူကွဲပြား၊ တစ်မူထူးခြားနိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါလေတော့၏။
သို့ဖြစ်၍လည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ သားသမီးမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းကောင်း ကြုံတွေ့လာနိုင်သောအိမ်ထောင်ရေးကံကို ချိန်ဆနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ အောက်ပါအတိုင်း မဟာဘုတ်ဖြင့် စာတစ်ပုဒ်ရေးသားလိုက်ရပေတော့သတည်း။ ။
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-မေ ၀၁ မှ ၀၇
Red dot ZAY ချစ်သူများအတွက် ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
ကျွန်ုပ်တွင်လွန်စွာရင်းနှီးချစ်ခင်ရသောငယ်သူငယ်ချင်းများရှိလေသည်။ ထိုသူငယ်ချင်းများအနက်တိုးကျော်နှင့် မိုးမိုးနှင်းဟူသောသူငယ်ချင်းနှစ်ဦးမှာ သူငယ်ချင်းချင်းအိမ်ထောင်ပြန်ကျကြလေသည်။ သူတို့သည် လွန်စွာမှအချစ်ကြီးချစ်ကြ၏။ ဘေးနားမှလူများပင်မနာလိုလောက်အောင်၊ အမြင်ကတ်လောက်အောင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ယုယကြင်နာဖေးမကြလေ၏။ နှစ်ဖက်သောမိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းတို့ကလည်း အထူးပင်သဘောတူထား၏။ သူတို့အိမ်ထောင်ကျသောအခါ နှစ်ဖက်မိဘတို့က အိမ်တစ်လုံးကိုပါလက်ဖွဲ့လေ၏။ သူတို့နှစ်ဦးလုံးသည်ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြ၏။ အိမ်တွင်လည်း မွေးမြူရေးကြက်များမွေးထားခြင်း၊ အ၀ီစိတွင်းတူး၍ ဘေးအိမ်များသို့ ရေပိုက်ဖြင့်သွယ်ပြီး ရေရောင်းခြင်း... စသည်တို့ကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားပြုလုပ်၍စီးပွားရှာကြလေရာ ၂ နှစ် ခန့်အချိန်အတွင်းမှာပင် သူတို့မိသားစုလေးသည်ထူးထူးခြားခြားပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် ဖြစ်လာလေတော့၏။
ပူလောင်အိုက်စပ်လှတဲ့ရာသီဥတုမှာ လူကြီးလူငယ်တွေသာမကကလေးတွေပါ အဲကွန်း ဒါမှမဟုတ် ပန်ကာလေးဖွင့်ထားမှ နေရတာသက်သောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ မီးပြတ်လို့ အဲကွန်း၊ ပန်ကာဖွင့်လို့မရတဲ့အချိန်ဆိုရင် လူကြီးတွေကယပ်တခပ်ခပ်၊ လူငယ်တွေကရေထချိုး၊ ကလေးတွေကတဂျီဂျီနဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာပါ။ ရာသီဥတုကပူတော့ အဲကွန်း ဒါမှမဟုတ် ပန်ကာလေးဖွင့်ထားမှနေလို့ထိုင်လို့အလုပ်လုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေအသုံးများနေတဲ့ဒီအဲကွန်းနဲ့ပန်ကာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လောက်အထိကောင်းကျိုးရှိပါသလဲ၊ ဆိုးကျိုးကောပေးနိုင်သလား? ဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဗဟုသုတအဖြစ် Red dot ZAY ကဒီဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၅ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း Red dot ZAY Facebook Page မှာ Post တင်ထားသည့်ကြော်ငြာ Video ကိုကြည့်ပြီး ပျော်စရာမေးခွန်း (၃) ခု ဖြေပေးရမှာပါ။
၁။ မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေမှန်ကို Video ထဲမှာရှာပြီး အဖြေတွေရပြီဆိုရင် Red dot ZAY Official Facebook Page သို့မိမိအသုံးပြုတဲ့ဖုန်း Operator အမျိုးအစားနဲ့အတူ Message ပေးပို့ရုံပါဘဲ။
၂။ Message ပို့ ပြီးကြောင်းကိုလည်း Post ရဲ့Comment မှာရေးပေးပါဦးနော်။
၃။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တော့ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူတွေလည်းကံစမ်းနိုင်အောင် Video Post Link ကို Public ထားပြီးသင့်ရဲ့ Wall မှာ Share ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Share ပြီးကြောင်းကိုလည်း Screenshot ရိုက်ပြီး Massage Box မှ တဆင့်ပို့ပေးရမှာပါ။
Massage ပို့ပေးသူများထဲမှ အဖြေမှန်ဖြေဆိုနိုင်သူ ၅ ဦး ကို ၅၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များ မေလ ၂ ရက်နေ့မှာ ကံစမ်းမဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-ဧပြီ ၂၄ မှ ၃၀
နွေရာသီမှာ လူကြီးတွေရောကလေးပါ ရေကူးသင့်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာကလေးတွေစနစ်တကျရေကူးတတ်အောင် ရေကူးသင်တန်းတွေပို့ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ရေကူးတာကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးပါ။ ရေကူးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရိုးတည်ဆောက်ပုံစနစ်ပေါ်မှာ ဒဏ်သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ တစ်ကိုယ်လုံးကိုကျန်းမာစေပါတယ်။ ရေကူးတာကြောင့် ကိုယ်နေဟန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းမှုကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရေကူးအားကစားဟာ ခန္တာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးရှိကြွက်သားအားလုံးနီးပါးကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ အခုလိုနွေရာသီမှာ ရေကူးခြင်းကို အားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို Red dot ZAY ချစ်သူများအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-ဧပြီ ၁၇ မှ ၂၃
COACH အိတ် အတုနဲ့ အစစ်ကို ဘယ်လိုခွဲမလဲ…
နာမည်ကြီး (Branded) ထုတ်ကုန်တွေဝယ်ယူတဲ့အခါ ပစ္စည်းအစစ်အမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ ခွဲခြားသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တကယ့် Branded ပစ္စည်းတွေဟာအရည်အသွေးကောင်းသလို ဈေးလည်းကောင်းတယ်လေ။ ဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးမှအတုဖြစ်နေရင်ပြီးပါလေရော။ ဒါကြောင့် အတုနဲ့အစစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့နည်းလေးတွေ Red dot ZAY ချစ်သူတွေသိထားဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်က New York City မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Coach အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းတွေဟာ နာမည်ကြီးပစ္စည်းဖြစ်သလို ဈေးလည်းကြီးတယ်။ Coach အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးအိတ်တွေ၊ Accessories တွေ၊ နာရီ၊ ဖိနပ်၊ လက်ဝတ်ရတနာစတာတွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အိတ်ကအခရာမို့ အိတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောပါမယ်။
Coach အိတ်တွေဟာ ဒီဇိုင်းလှပတဲ့အပြင်တာရှည်လည်းအသုံးခံတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသာသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကလည်းမြင့်ပြီးနာမည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Coach ပစ္စည်းစစ်၊ မစစ်ကို အဓိက ၅ ချက်နဲ့ စစ်လို့ရပါတယ်။
Like & Share မယ်… Mention ခေါ်မယ်… ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ယူမယ်…
သင်္ကြန်တွင်းမှာ အပိုဝင်ငွေ ရဖို့ ကံစမ်းမယ်…
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… သင်္ကြန်တွင်းမှာ အသုံးအစွဲများသွားလို့ သင်္ကြန်အပြီးမှာ သုံးစရာ ပိုက်ဆံ မလုံလောက်တော့မှာ ကြိုပြီးတော့ စိုးရိမ်နေပါသလား? စိုးရိမ်နေတာတွေဖျောက်ပစ်လိုက်ပါတော့… Red dot ZAY က ကူညီပေးမဲ့ အထူးအစီအစဉ်လေး တစ်ခုရှိနေပါတယ်…
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-ဧပြီ ၁၀ မှ ၁၆
သင်္ကြန်ပွဲမှာ ရေပက်ခံပဲထွက်ထွက်၊ မဏ္ဍပ်ပဲထိုင်ထိုင် အသားအရေထိခိုက်မှာကိုတော့စိတ်ပူစရာပဲနော်… သင်္ကြန်ပွဲမှာအလှဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်မယ်၊ ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့အတူပျော်မယ် စသဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပြီးဖြစ်တဲ့သင်္ကြန်မောင်မယ်လေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အသားအရေထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့ရာအတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုအကြံပြုပေးပါရစေ။
Find hidden photos and quote to win exciting prizes!!!
Win below prizes from Red dot ZAY 'Bwan' campaign...
1. Lunch with Mikis Weber
2. To be the first person to play water with Mikis Weber for 2017 Water Festival
3. Photo section with Mikis Weber
4. Red dot ZAY shirt, cap and mug with Mikis Weber’s signature
5. Cash 50,000
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-ဧပြီ ၀၃ မှ ၀၉
Red dot ZAY မှာပဟေဠိများကိုအဖြေညှိမယ့်စုံထောက်ကြီးဦးစံရှားပြန်လာပါပြီ!!!
Level5အတွက်သဲလွန်စ!
Game ကစားနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီနေရာ မှာဖတ်ကြည့်ပေးပါ...
Red dot ZAY မှာပဟေဠိများကိုအဖြေညှိမယ့်စုံထောက်ကြီးဦးစံရှားပြန်လာပါပြီ!!!
Level4အတွက်သဲလွန်စ!
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-မတ်လ ၂၇ မှ ဧပြီ ၀၂
Red dot ZAY ချစ်သူများအတွက်ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
Level3အတွက်သဲလွန်စ!
Level2အတွက်သဲလွန်စ!
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-မတ်လ ၂၀ မှ ၂၆
Red dot ZAY ရဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးတွေအတွက် ခေတ်သစ်စုံထောက်ကြီးဦးစံရှားဂိမ်းအစီအစဉ်အသစ်ကို မတ်လ (သင်္ကြန်မတိုင်မှီ) တွင် စိတ်ဝင်စားစရာဆုလက်ဆောင်များနှင့်အတူပြန်လည်ယူဆောင်လာပါပြီ။ ဒီပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းကို အဆင့်ငါးဆင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဆင့်ငါးဆင့်လုံးကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အောင်မြင်ပြီးပါက Red dot ZAY မှကံစမ်းအစီအစဉ်နဲ့ မဲနှိုက်ပြီး ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအစီအစဉ်ရဲ့ သတ်မှတ်ကာလကတော့ (မတ်လ ၁၇ မှ ၃၁ရက်နေ့) အထိဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီခွင်အလိုက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း-မတ်လ ၁၃ မှ ၁၉
နွေနေပူမှာ အပြင်သွားပြီးပြန်လာရင် အသားအရေနွမ်းခြောက်သွားသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုကြောင့်ချွေးထွက်များပြီး နေပူရှိန်ကြောင့်အရေပြားနေလောင်ကာ အသားအရေရဲ့ နုပျို လန်းဆန်းမှုလည်းမှိန်ဖျော့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွေကာလတစ်လျှောက်လုံးအသားအရေကျန်းမာလန်းဆန်းနေစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
“မိုး…မိုး… မိုးလားမောင်တို့၊ လေ…လေ…လေလားမောင်တို့၊ မိုးနဲ့လေနှစ်ပါးဆိုင် သိကြားကိုယ်တိုင် မမယ် အတာပွဲ“
Red dot ZAY Website တွင် Login လုပ်ရုံဖြင့်ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များစွာရယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေး
ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတော့...မတ်လ ၆ ရက်မှ မတ် ၂၀ ရက်အတွင်း Red dot ZAY website သို့ဝင်ရောက်ပြီး Login လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Red dot ZAY Facebook မှ Lotin Campaign Post အောက်တွင် Username နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို Comment ပေးရုံပါပဲ။ ထို Username နှင့် Login ဝင်ထားကြောင်း မှန်မမှန်ကို Red dot ZAY မှပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များကိုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းအကြိမ်များများဝင်လေ ငွေဖြည့်ကဒ်ပမဏများများပိုရလေဖြစ်မှာပါ… ငွေဖြည့်ကဒ်ရရှိနိုင်သည့်ပမာဏကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
တစ်ချိန်က Mobile Phone လောကမှာဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nokia ကသူ့ ရဲ့ ထီးနန်းအတွက် Nokia 3310 နှင့် အတူပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါပြီ…
Touch Screen Mobile Phone များပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေတဲ့ Mobile Phone လောကကို Nokia က သူတို့ ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း Keypad ဖုန်းနဲ့ လေးနဲ့ တစ်ကျော့ပြန်ဆန်းသစ်စေလိုက်ပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာဈေးကွက်အတွင်းကအနားယူထားတဲ့ Nokia ဟာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာအချိန်မှာ တော့အများမထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေပူပေမယ့် နေပြင်းပြင်းပူချိန်မှာပဲ အေးချမ်းတဲ့အလှနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့၊ မြင်သူတိုင်း အပူမကူးဘဲအေးမြသွားစေဖို့ မိတ်ကပ်လိမ်းရာမှာသတိ ပြုသင့်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။
ပျော်စရာဗီဒီယိုကြည့်ရင်းအဖြေလေးတွေခန့်မှန်းပြီးဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်တွေရယူကြပါစို့ ! (ဒုတိယပိုင်း)
မတ်လ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း Red dot ZAY Facebook စာမျက်နှာ မှစက္ကန့် သုံးဆယ်စာ Video လေးကိုကြည့်ပြီး ပျော်စရာမေးခွန်း ၃ ခု ဖြေပေးရမှာပါ။ အဖြေတွေရပြီဆိုရင်တော့ အဖြေမှန် ၃ ခုကို ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အတူ Red dot ZAY Official Facebook Page သို့ Message ပေးပို့ရုံပါပဲ။
Massage ပို့ပြီးကြောင်းကိုလည်း Post ရဲ့Comment မှာရေးပေးပါဦးနော်… Message ပေးပို့ သူများထဲမှ အဖြေမှန်အမြန်ဆုံးပို့နိုင်သူပထမဆုံးအယောက် ၅၀ ကို ၁၀၀၀ တန်ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များ ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ်အဖြေမှန်ဖြေဆိုနိုင်သူများထဲမှအယောက် ၅၀ ထပ်မံရွေးချယ်ပြီး ၁၀၀၀ တန်ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များကို ၃၁ ရက်နေ့ မှာမဲနှိုက်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်သွားမှာပါ။
အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်ပန်းနွမ်းလျမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းတွေက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုသက်သာပျောက်ကင်းအောင်အထောက်အကူပြုတဲ့အတွက် Red dot ZAY ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခရီးသွားစဉ်ပေါ့ပေါ့ပါ့းပါးထုတ်ပိုးနိုင်သောနည်းလမ်း ၁၀ ခု
ကျောင်းတွေလည်းပိတ်၊ အားလပ်ရက်တွေလည်းပေါတဲ့ရာသီဖြစ်တာကြောင့် ခရီးသွားဖို့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုပ်ပိုးဖို့ တဲ့အခါလွယ်ကူစေဖို့ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရီးသွားခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အနားယူဖို့ နှင့်ဒေသန္တရဗဟုသုတရဖို့ ပါ။ မလိုအပ်ပဲအထုတ်အပိုး အများကြီးနဲ့ ပစ္စည်းလေးလေးပင်ပင်ကြီးတွေသယ်ပြီးခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ခရီးစဉ်ရဲ့ အရသာကိုအနည်းငယ် တော့ ရှတတဖြစ်စေမှာအမှန်ပါပဲ။ အဲ့ဒီအစားပေါ့ပေါ့ပါးပါးထုတ်ပိုးပြီးခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့ တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ အရသာကို ခံစားရမှာပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့ ထုတ်ပိုးနည်းတွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးခရီးသွားကြည့်လိုက်ပါ...
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အတွင်း Red dot ZAY Facebook စာမျက်နှာမှ စက္ကန့် သုံးဆယ်စာ Video လေးကိုကြည့်ပြီး ပျော်စရာမေးခွန်း ၃ ခုကိုဖြေပေးရမှာပါ။ အဖြေတွေရပြီဆိုရင်တော့ အဖြေမှန် ၃ ခုကို ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အတူ Red dot ZAY Official Facebook Page သို့ Message ပေးပို့ရုံပါပဲ။ Message ပို့ ပြီးကြောင်းကိုလည်း Post ရဲ့Comment မှာရေးပေးပါဦးနော်…
Massage ပို့ပေးသူများထဲမှအဖြေမှန်အမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်သူပထမဆုံးအယောက် ၁၀၀ ကို ၁၀၀၀ တန်ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များ ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
123 Buy and Sell